I-Bizzabo: Nika Amandla Imicimbi Yakho Engaphakathi Komuntu kanye ne-Virtual ku-Platform Eyodwa | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Okthoba 2, 2020 NgoLwesihlanu, Okthoba 2, 2020 Douglas Karr
IBizzabo iyipulatifomu yempumelelo yomcimbi enikeza iqembu lakho ngawo wonke amathuluzi alidingayo ukudala imicimbi enomvuzo ngenkathi ifinyelela imininingwane yokusiza imicimbi yakho ikhule ngezindlela obungakaze ucabange ukuthi zingenzeka.
Izici zePulatifomu Yomcimbi weBizzabo
Konke-kukodwa kukaBizzabo isoftware yomcimbi inika amandla imicimbi yomuntu nomuntu ukuletha okuhlangenwe nakho okuhlukile kwabahambele umhlangano ngokuzibandakanya komuntu okwenziwe ngobuhlakani nangenhloso.
Ukubhaliswa Kwesehlakalo - hlela ngokugcwele isivakashi sakho kumuzwa wababekhona ngezindlela ezicebile nezimangalisa, izinhlobo zamathikithi amaningi.
Iwebhusayithi Yomcimbi - yakha iwebhusayithi yomcimbi enophawu olunomhleli onamandla ohlanganiswe ngokuphelele nesoftware yakho yokubhalisa umcimbi kanye nohlelo lokusebenza lomcimbi.
Khulumisana - Thumela izimemo ze-imeyili nemikhankaso yokukhangisa eqhuba inzalo nokubhaliswa ngosizo lokuqukethwe okwenziwe ngezifiso.
Zibandakanye - Izaziso zohlelo lokusebenza, ukuxhumana nabantu ngamunye, i-ajenda exhumanayo, nokuvota bukhoma konke kusebenza ndawonye ukugcina ababekhona bahlanganyela — ngaphakathi nangaphandle kohlelo lokusebenza lomcimbi weselula.
Yenza imali - Nikeza abaxhasi bakho amathuba ayingqayizivele, kufaka phakathi izikrini zokwehlela ngokwezifiso, ukunikezwa okukhethekile, izaziso ezizenzakalelayo zokumemeza, ama-sponsorship tiers nedatha yokukala ngokunembile i-ROI yomxhasi.
Umbiko - Ukubika okujulile kwenza kube lula ngethimba lakho ukuqonda ukuthi imicimbi isebenza kanjani uma kuqhathaniswa nezilinganiso. Setha izinhloso, landelela imali nokuzibandakanya, nokuningi.
IBizzabo isiza izinkampani ukukala, ukuphatha, nokukala imicimbi emiphumeleni yebhizinisi esemqoka - inika amandla wonke umgqugquzeli, umakethi, umbukiso, kanye nababekhona ukuveza amandla emicimbi yobungcweti.
Imicimbi Ebonakalayo ye-Bizzabo
I-Bizzabo isiza izinkampani ukuthi zifinyelele ebangeni eliphelele lokuzibandakanya kwezithameli ngokuhlangenwe nakho oku (cishe) ezinomthelela njengezehlakalo zomuntu uqobo, noma ngabe ukuphi kwabakhona. Ngesisombululo sabo sokuphela, uyakwazi ukuletha ukusakazwa kwekhwalithi ephezulu namavidiyo adingeka kakhulu ngesisombululo sebanga lebhizinisi. Izici zifaka:
Sakaza bukhoma yonke imicimbi noma amaseshini athile kuzethameli zomhlaba zanoma yisiphi isayizi ngeplatifomu ehamba phambili yevidiyo, enikwe amandla yi- Kaltura.
Yakhelwe ngamazinga aphakeme kakhulu ezokuphepha nezindinganiso zobumfihlo ukuqinisekisa ukuthi idatha yakho ivikelwe futhi ithobela imithetho.
Khulisa imali yoxhaso ngokukhangisa okungaphakathi kwevidiyo ukufakwa koxhaso kuwo wonke umcimbi wakho.
Nweba ikhambi elibonakalayo likaBizzabo bese uxhuma kubuchwepheshe bevidiyo obukhethayo.
IBizzabo Futhi Inikela Ngezinsizakalo Zokukhiqiza Okubonakalayo
Ithimba le-Virtual Production Services le-Bizzabo linikela ngezinsizakalo zokugcina nezokugcina ezihlanganisa ukukhiqizwa okugcwele, umsindo nokubonwayo, ukwakhiwa, ukuqaliswa, nokuningi.
Kusukela ekulungiseleleni izipikha nabamengameli ukusakazwa okukhiqizwe kakhulu, iBizzabo inikeza izinsiza ezahlukahlukene ukulingana nezidingo zakho zomcimbi.
UBizzabo unika amandla imicimbi yemikhiqizo efana neForbes, I-HubspotINBOUND, uDow Jones, iGainight, nabanye abaningi. Le nkampani yasungulwa nguBoaz Katz, Alon Alroy, no-Eran Ben-Shushan, futhi inabasebenzi abangaphezu kwekhulu emahhovisi aseNew York naseTel-Aviv.
Tags: bizzabouhlelo lokusebenza lwenkomfaingqungquthela yezokumakethasocial networking